China 6090 NTEK Flat Bed Phone Cover Cover Printer Printing Machine vatengesi nevatengesi | Ntek
6090 NTEK Flat Bed Phone Cover Cover Printing Machine Kutengesa
Yakagadzirwa neJapan EPSON DX5 / DX7 / XP600 / TX800 / Ricoh GH2220 misoro
Iine chena inki inomutsa basa uye neingi level alarm basa
CMYK chena uye varnish sarudzo ye glossy pamusoro uye yepamusoro mhando kudhinda
Yakachena inomutsa system uye Ink level alarm system inowanikwa
Taiwan HIWIN gwara njanji yekugadzikana kushanda
900mm WIDTH inokurumidza kupfuura 600mm upamhi hweprinta
Unogona kudhinda zvakapetwa zvinhu kana cylindrical zvinhu, senge peni, bhodhoro uye mukombe, nezvimwe
YC6090UV flatbed printer inoshandiswa zvakanyanya kudhinda pagirazi, ceramic tile, PVC siringi, aruminiyamu jira, huni MDF bhodhi, simbi, mapaneru, aruminiyamu jira, bhiribhodi, acrylic pani, pepa bhodhi, furo bhodhi, PVC, nezvimwewo. Printa yedu ndeyeyese-simbi yakarongedzwa dhizaini ine yakagadzikana oparesheni Izvo zviyero zvemuchina ndeizvi: kureba 100cm, upamhi 210cm, kukwirira 120cm. Saizi yekudhinda iri 600mm yakafara uye kureba kuri 900mm.
Yakashongedzerwa neEkupinza EPSON misoro ine 180 nozzles 8 chiteshi, iine 2-4 misoro yekumhanya kwakanyanya uye mhando yepamusoro.
Dhinda musoro tekinoroji ndeye piezoelectric anodhinda musoro kudhinda. Hapana kupisa kana uchishanda, saka inogona kudzivirira kuchembera. Iyo yekumhanyisa kumhanya kwayo inogona kusvika kusvika ku6-12sqm / h Ruvara neCMYK chena uye varnish inosarudzika yekupenya kwepasirese kudhinda. Media ukobvu ndeye 100mm, yakakwirira inogona kuvezwa. Tora chena inki otomatiki kutenderera system kudzivirira chena ingi kunaya. Aluminium aligned chikuva chekuita nyore mashandiro uye chengetedza simba. Yakashongedzerwa neyega-yakatsvaga inotonhorera inotorwa uye yepamusoro-simba aruminiyamu danda, yakashandiswa Ultra simba yemuchadenga aruminiyamu zvinhu, inova nechokwadi yekudhinda chaiyo uye kugadzikana, inosimbisa yakakwana kuburitsa. Mvura inotenderera inotonhora sisitimu ye UV akatungidza mwenje. Otomatiki Kureba Kuyera, purindaita inokwanisa kuyera kureba. Inogona otomatiki kuchenesa uye otomatiki moisturize. Shandisa yakakwenenzverwa mbeveve liner gwara njanji, hwakareba hupenyu hwehupenyu, kugadzikana kwakadzika, kwakanyanya kudzikisira ruzha apo purinda iri kudhinda. Iyo rotary chishandiso yakaiswa pamusoro pevhavha yekukweva chikuva, iyo inoona zvese zvakapetwa zvinhu uye humburumbira zvinhu kudhinda, semabhodhoro kana makapu. Neprinta yedu, 3D embossing tekinoroji inowanikwa neyakajeka kudhinda maitiro.
Muchina unofanirwa kushanda munzvimbo ine tembiricha yemadhigirii makumi maviri kusvika makumi matatu uye hunyoro hwe40% kusvika 60%. Kana iyo purinda isingashandiswi kwenguva yakareba, gezai maprinta pamwe nemvura yekuchenesa uye muaise munzvimbo inotonhorera sezvinobvira kunze kwechiedza uye isingapepere nemhepo.
Pashure: Yakakura fomati muchina UV Hybrid Printer Mutengo Dhijitari Flex Banner Kudhinda Muchina
Zvadaro: 2030L Inkjet printer yakagadziriswa bhokisi yekudhinda muchina uv printer iri kutengeswa
Prinda Muchina wekudhinda
Uv Printer YeGirazi Rokudhinda Muchina
3321R Huru Rudzi YC3321R UV Mbeu dzakauchikwa Printer Ro ...
2030L Inkjet purinda chemarata bhokisi kudhinda ma ...